Zuva ramai rine mufaro! | Martech Zone
Svondo, May 13, 2018 Mugovera, Kukadzi 13, 2021 Douglas Karr
Zuva raAmai izororo rechitatu rakakura rekutengesa regore riine mari inodarika $ 3 bhiriyoni yakashandiswa muUnited States chete. 22.3% yevaAmerican vanotenga zvishongo zveZuva raAmai, i35.5% yekuwedzera kwegore pagore. Ichokwadi, mari yechipo chaAmai Zuva rekushandisa rinotarisirwa kuwedzera 6.8% gore pamusoro pegore.
Unomboshamisika kuti nei Zuva raAmai richinyanya kuzivikanwa kupfuura Zuva raBaba? Wanga uchiziva here kuti Zuva raAmai rave riri zororo renyika anopfuura hafu yezana ramakore zvakareba? Iwe ungazvitenda here kana tikakuudza kuti kwagara kuine vanaamai kupfuura madzibaba? Huye, humbowo hwakanyorwa chaizvo muDNA medu. RewardExpert
Heano anoshamisa infographic ayo anonongedzera kune imwe yenhoroondo yeZuva raAmai uye neshanduro mukushandisa kwevatengi pazororo rakakosha iri. Mushure mezvose, hapana mumwe wedu angadai ari pano dai pasina chinhu chakadai saamai! Zuva ramai rine mufaro!
Tags: mazororoinfographiczuva raamai